के देवी सीता रावणकी छोरी थिइन? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
के देवी सीता रावणकी छोरी थिइन?
घर योग आध्यात्मिकता विश्वास रहस्यवाद विश्वास रहस्यवाद oi-Sanchita द्वारा संचिता चौधरी | प्रकाशित: शुक्रवार, मे १,, २०१ 2014, १:14:१:14 [IST]
हो, तपाईंले हेडलाईन सहि पढ्नु भएको छ। हामी सबै कथाको संस्करणमा प्रयुक्त छौं जसमा दुष्ट रावणले देवी सितालाई जंगलबाट अपहरण गरी उनीकी बहिनीको अपमानको बदला लिन्छन्। तर यदि त्यहाँ कथाको पूर्ण भिन्न संस्करण छ भने?
अंग्रेजीमा केटी बच्चा नारा लगाउने बचत गर्नुहोस्
भारतीय पौराणिक कथा मनमोहक रहस्यहरूको दुनिया हो। सबै शास्त्रहरु मध्ये, रामायण र महाभारत दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चाखलाग्दो शास्त्रहरु हो जुन धेरै विद्वानहरु को अध्ययन को विषय भएको छ। मौलिक पदहरू बाहेक मौखिक परम्परा र लोककथाले यी महाकाव्यहरू सबैलाई अझ रमाइलो बनाउँदछ र पात्रहरूको बारेमा खुलासाले मानिसहरूलाई चकित तुल्याउन सक्छ।
किन द्राउपदीले उनको कपाल कहिल्यै लगाए?
रामायणको सम्पूर्ण कथा रावणले सीताको जबरजस्ती अपहरणको वरिपरि घुम्छ र कसरी भगवान् रामले आफ्नी श्रीमतीलाई फर्काउनको लागि राक्षस राजालाई युद्ध गरे। जबकि कथा मा एक मोड छ। धेरै लोककथा र पुरानो धर्मशास्त्रका अनुसार रावणलाई देवी सीताका पिता भनिन्छ। यो समाचार पक्कै धेरैको लागि एक सदमेको छ। तर त्यहाँ पर्याप्त प्रमाणहरू छन् जसले शूर्पणखाको अपमान बाहेक रावणले सीतालाई अपहरण गर्नुका अरु धेरै कारणहरू छन् भनेर देखाउँदछ।
त्यसोभए, देवी सीता वास्तवमा रावणकी छोरी थिइन? पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
सीताको जन्म रहस्य
भनिन्छ कि देवी सीता पृथ्वीबाट जन्मिएको थियो। राजा जनकले सीतालाई मैदानमा भेट्टाए र भूमि नहेर्दासम्म। यसकारण, उनले उनलाई आफ्नी छोरीको रूपमा ग्रहण गरे। रामायणको उत्तर-पश्चिमी संस्करणहरूमा, सीता मेनकाको ईश्वरीय सन्तान हो भनिन्छ जो राजा जनकले अपनाए। केही शास्त्रले सीता जनककी वास्तविक छोरी थिइन भनेर पनि बताउँदछन्। तर धेरै जसो शास्त्रले भन्छ कि सीता लुगामा पुरिएको थियो।
केही कथाहरूले सीता वेदवतीको पुनर्जन्म थियो भन्ने संकेत गर्दछ। वेदवती एक ब्राह्मण महिला थिइनन् जसलाई रावणले दुर्व्यवहार गरेको थियो। जब रावणले उनको शुद्धीकरण गरेकी थिइन्, उनले आफूलाई पायरमा जलाइन् र उनी अर्को जन्ममा रावणको मृत्युको कारण हुने प्रतिज्ञा गरे। यसरी उनी सीताको रूपमा पुनर्जन्ममा परिन्।
अंडा सेतो कपाल को लागी राम्रो छ
उत्तर पुराणका अनुसार एकपटक रावणको अलकपुरी की राजकुमारी मणिवतीको खराब अभिप्राय थियो। उनले रावणको बदला लिने वाचा गरे। पछि उनी रावण र मन्डोदरीकी छोरीको रूपमा पुनर्जन्म लिइन्। तर ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गरे कि बच्चाले साम्राज्यको विनाश ल्याउनेछ। त्यसोभए, रावणले आफ्नो नोकरलाई बच्चालाई मार्ने हुकुम गरे। तर नोकरले केटीलाई मारेन र बरु उनलाई मिथिलामा गाडिदिए जहाँ उनी जनकले भेट्टाए।
रावणले आफ्नी छोरीलाई त्यागे
रामायणको जैना संस्करण अनुसार सीता रावणकी छोरीको रूपमा जन्म भएको थियो। यद्यपि ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गरे कि रावणको पहिलो बच्चाले उनको वंशलाई नष्ट गर्नेछ। त्यसकारण रावणले आफ्ना नोकरहरूलाई आदेश दिए कि उसले त्यो केटो टाढा टाढाको ठाउँमा लग्यो र उसलाई त्यहाँ गाडि। यसैले उनी भेटिए र जनकले अपनाए।
रावणको सीताप्रतिको प्रेम
रावण सीतालाई माया गर्थे तर बुबाले आफ्नी छोरीलाई मात्र माया गर्छन्। यो संस्करण जैन रामायणमा देखा पर्दछ। भनिन्छ कि जब सीताको जन्म मंदोदरीमा भएको थियो, रावण अत्यन्तै रमाए। तर जब उनले भविष्यवाणी गरे कि त्यो उनको विनाशको कारण हुनेछ, रावणले आफ्ना नोकरहरूलाई उनलाई टाढाको भूमिमा पठाइदिन भने। तर उनले सीताको ठाँउमा नजर राखे। सीता राजाले अपनाएकी थिई र उनी अझै राजकुमारी थिइन भन्नेमा उनी औधी खुसी भए। उनी सीताको स्वयम्वर समारोहमा पनि सहभागी भए। सीताले अयोध्याका वीर आर्य राजकुमार रामसँग विवाह गरेको देखेर उनी खुसी भए। रामलाई १ 14 बर्षको लागि निर्वासनमा पठाइए सम्म सबै ठीकठाक थियो।
सीताको अपहरण: बुबाको प्रेम वा बदला?
जब रावणलाई थाहा भयो कि सीता पनि भगवान् रामसँग वनमा बसोबास गरिरहेका थिए, उनले आफ्नी छोरीलाई अपहरण गर्ने र उनको दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने निर्णय गरे। त्यसोभए, उनले सीतालाई अपहरण गरे र उनलाई ल to्कमा लगे। मानिसहरूले रावण र बहिनीको नाक काट्ने बित्तिकै यसलाई राम र लक्ष्मणको बिरूद्ध बदलाको रूपमा देखेका थिए। तर यो एक बुबा थिए जसले आफ्नी छोरीलाई दु: खबाट जोगाउँदै थिए। उनी रावणकी श्रीमती मंदोदरीले पनि सीताप्रतिको आफ्नो प्रेमको गलत झुकाव राखे किनकि उनी निद्रामा उनको नाम दोहोर्याइरहन्न्।
हामी छाडा चालमा के खानु पर्छ
जे होस् उनकी छोरी होस् या सीता अन्ततः रावणको विनाशको कारण भयो। यो पनि भनिन्छ कि रावणले सीताप्रतिको आफ्नो सुरक्षापूर्ण पिताको कारण भगवान रामको अधीनमा थिएनन्। ऊ फेरि ज the्गलमा जान चाहँदैन थियो। त्यसकारण उनले ठूलो लडाईं बनाए जसमा उनी रामले पछि मारिए, यसैले ती भविष्यवाणीहरू सत्य साबित भए।
अनुहार कपाल हटाउन को लागी अनुहार
स्वतन्त्रता दिन को लागी ट्राई रंगीन पोशाक
औंठीमा चाँदीको औठी लगाउनुको ज्योतिषीय फाइदाहरू
राति अँध्यारो सर्कलबाट छुटकारा पाउनुहोस्
एक बच्चा केटा भएको संकेत